Is Zimbabwe next to South Africa?
Question: Is Zimbabwe next to South Africa?
What is the relationship between Zimbabwe and South Africa?
How much is a bus ticket from South Africa to Zimbabwe?
Zimbabwe is landlocked; the Zambezi forms a natural riverine boundary with Zambia; in full flood (February-April) the massive Victoria Falls on the river forms the worlds largest curtain of falling water. Location: Borders Zambia, Mozambique,Botswana, South Africa and Namibia.
South Africa–Zimbabwe relations have been generally cordial since the end of apartheid in South Africa, although there have been tensions due to political troubles in Zimbabwe in recent years. South Africa has a mission in Harare. Zimbabwe has an embassy in Pretoria and a consulate general in Johannesburg.
The cheapest way to get from South Africa to Zimbabwe is to bus which costs R 450 - R 800 and takes 20h.